YouTube: Sithini isicwangciso sakho seVidiyo apho? | Martech Zone
Sisoloko sigxile kwizikhewu xa kufikwa kwisicwangciso sokuthengisa sedijithali sabathengi. Iinjini zokukhangela ayisiyojelo nje lamashishini kunye nabathengi lokufumana iimveliso abazijongayo, ii-algorithms zikwangumqondiso obalaseleyo wegunya lophawu kwi-intanethi. Njengoko sihlalutya umxholo oqhuba uphawu kwi-brand, sithelekisa umxholo kwindawo nganye yomntu okhuphisana naye ukubona ukuba yintoni umahluko.
Rhoqo, omnye wabo umahluko unjalo yokuzonwabisa. Kukho ezininzi iintlobo zevidiyo inokuveliswa, kodwa iividiyo ezichazayo, njani-iividiyo, kunye nokuqinisekiswa kwabathengi zezona zinto zinempembelelo kumashishini. Njani-kunye nesitayile sevidiyo kwi #YouTube fumana umndilili we-8,332 yokujonga, elona candelo lidumileyo ecaleni kweevidiyo zokuzonwabisa.
Ukuba lixesha lokukhuphisana nomxholo wevidiyo, ndingacebisa inkampani yakho ukuba ibeke isicwangciso esifanelekileyo:
Beka bucala uhlahlo-lwabiwo mali lwe- Ividiyo ecacisayo loo nto ifike kwimizuzu emi-2 ubude. Khumbula ukuba le vidiyo iza kunamathela kuwe okwethutyana, ke ngoko kuqinisekisa ukwenziwa kophawu olungagungqiyo, ukususa naliphi na ixesha elichaziweyo, kunye nokuhlekisa ngekamva kuya kuba sisicwangciso esihle. Ividiyo yoopopayi eqhuba kakuhle inokuba yi- $ 5k ukuya kwi- $ 10k-kodwa imbuyekezo enkulu kutyalo-mali.
Thatha lonke ithuba onalo lokuthatha ifilimu iividiyo zokungqina. Nokuba oko kuthetha ukuba uqesha abasebenzi befilimu kwaye ubathumele kubathengi bakho, kuya kufuneka utyale imali kuyo ngokupheleleyo. Iingqinisiso zimpawu zokuthembela ezingenakubethwa. Banokuphinda baphinde babhengezwe kwimixholo ebhaliweyo kuyo yonke imithombo yedijithali kunye nokuprinta. Musa ukuwajongela phantsi amandla obungqina beemvakalelo kwinkampani yakho.
Sebenza kwi iividiyo zobunkokeli ekhanyisa izibonelelo zabasebenzi kunye nenkcubeko yenkampani yakho eyahlulahlula kukhuphiswano. Ukusebenza ngokukuko, sihlala sicwangcisa usuku lonke okanye ezimbini zokudubula kweenkokheli zeshishini. Ngokwenza oku, sinokwenza iividiyo ezibonakalayo ezijolise kumntu omnye ngexesha, okanye sinokuxuba kunye nokudibanisa iividiyo ezinemixholo eyahlukeneyo.
Ungalibali ukuba iividiyo azisiyo nje into encomekayo kwindawo yakho, i-Youtube ngokwayo iyaqhubeka ukukhokelela kukhangelo lwe-Intanethi ecaleni kukaGoogle. Yandisa i-Youtube yakho Umjelo kunye nevidiyo nganye yempembelelo ephezulu. Velisa ezinye iividiyo rhoqo ukwakha ababhalisile kwaye uqale uluntu lwakho.
Yintoni ejikeleze ikona? Live ividiyo. I-YouTube itsibela iintloko kuqala kumdlalo osasazwayo. Sisekwangoko, kodwa ngamanye amaxesha lelona xesha lilungileyo lokutsiba kubuchwephesha obuvelayo. Ngaphambi kokuba iimveliso ezinkulu zenze utyalomali, amashishini amancinci agile anokusebenzisa kwaye aqhube isabelo esikhulu sentengiso. Ngokuqinisekileyo kukungcakaza- kodwa siyibonile ihlawula ngokuphindaphindiweyo.
Le infographic evela Izitudiyo ezibonakalayo zeZ iya kukubonelela ngesishwankathelo sendlela ebaluleke ngayo eli jelo xa usebenza nevidiyo.
tags: iividiyo ezingqina abathengiIvidiyo ecacisayonjani-kwividiyoi-youtube ilungile kubaphulaphuli bakhohlaliswaiividiyo zokungqinaiividiyo zobunkokeliIindidi zevidiyoizibalo zevidiyoyyoutubeyoutube live
Jul 17, 2017 ngo-7: 53 AM
Ndiyayithanda iYouTube. Ndiphinda ndisebenzise umxholo ovela kuFacebook ngoku ngqo kwisiza. Ndingazishumeka iividiyo ngokuthe ngqo ukusuka apho ukuya kwiindawo zam ezikhoyo.
I-YouTube Live yindlela entle yokwakha uluntu ngokukhawuleza, kwaye ngokungafaniyo noFacebook, apho abantu bakhoyo, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, ndiyazi ukuba abantu bakwiYouTube ngenjongo enye. ukubukela ividiyo. Kukho abaphulaphuli abazinikeleyo, kwaye ngeengxoxo ezibukhoma, yenza ukuba amava abe ngakumbi nangakumbi. Ndibone i-6 yeyure yemifudlana ephilayo eyayimangalisa kakhulu.